Shaqada xafiisyada dowladda Maraykanka oo xiran bishii labaad. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Shaqada xafiisyada dowladda Maraykanka oo xiran bishii labaad.
On Jan 23, 2019 210 0
Weli waxaa xiran xafiisyada dowladda federaalka Maraykanka, kadib khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha wadankaas Donald Trump iyo madaxda xisbiga Dimuqraadiga.
Waxaa bishii labad xiran inta badan shaqooyinka maamullada federaalka Maraykanka, waxaana gebi ahaanba meesha ka baxay mushaaraadkii ay qaadanayeen shaqaalaha dowladda, kuwaas oo la arkayay iyagoo dawarsanaya dadka Ameericaanka ah.
Donald Trump ayaa joojiyay inta badan shaqada xafiisyada dowladda, kadib markii xisbiga dimuqraadiga oo heysta aqlabiyadda kuraasta aqalka Odoyaasha uu diiday inuu u codeeyo soo jeedinta Trump ee ah in la meel mariyo miisaaniyadda ku baxeysa dhisida derbi kala xira Maraykanka iyo Maxico.
Trump ayaa codsaday lacag gaareysa 5 bilyan oo dollar, wuxuuna u arkaa mashruuca dhismaha derbigaas inuu yahay mid ka qeyb qaadan kara amniga dalka Maraykanka.
Maalinta Khamiista ah ee soo socota ayaa la filayaa in kulan ay yeeshaan odoayasha Aqalka Maraykanka, kulankaas oo loogu codeyn doono miisaaniyadda uu dalbaday Trump, si uu u dhiso derbi kala qeybiya Maraykanka iyo Maxico.
Donald Trump, madaxweynaha dhimirka la’ ee Maraykanka ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay cunsuri madx adag oo aan fiyoobeyn, waxaana uu jeclahay inuu meel mariyo waxyaabaha uu doonayo.